ကားတွေ အမည်ပြောင်း အခွန်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စ လူထုအသံ – Voice of Myanmar
ကားတွေ အမည်ပြောင်း အခွန်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စ လူထုအသံ
ခု ကားမည်ပေါက်ပြောင်း အခွန်ဆောင်ရမှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကားပိုင်ရှင် ကိုကျော်ကြီးက ဗီအိုအမ်ကနေ အများပြည်သူသိအောင် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ထားပါတယ်။
မှန်တာပြော ဘာမှကို ပြောချင်စိတ်မရှိတာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အားနည်းချက်တွေက အများကြီးလို့မြင်သလိုပဲ ၊ အစိုးရက သူတို့ဖြစ်ချင်တာလုပ်တာ ပြည်သူ့ကောင်းကျိုးလား သူတို့ကောင်းကျိုးလားကို မကွဲဘူး
ကားကို ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကို အပြည့်အ၀လက်ခံတယ်။ ဖြစ်သင့်တယ်။
အမည်ပေါက်ပြောင်းရတာ ကိစ္စမရှိပေမယ့် အခွန်ထပ်ဆောင်ရတာမှာ ပြောစရာ ထောက်ပြစရာ အားနည်းချက်တွေက အများကြီး
တကယ်တော့ဗျာ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ကားဟောင်းအပ် ကားသစ်စသွင်းခွင့်ပြုကတည်းက ကိုယ့်ကားဟာ ကိုယ့်အမည့်ပေါက်ဖြစ်ရမယ် သက်တမ်းတိုးရင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဘာအတွက်လျော့ပေးခဲ့လဲ။
အဲ့လိုလျော့ပေးခဲ့တော့ဗျာ အဲ့အချိန်က ကားဝယ်ရင် နာမည်ပေါက်ရရ မရရ ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ ဝယ်ခဲ့တာပဲ။ နာမည်ပေါက်ရလည်း ဒီဈေးပဲ။ မရလည်းဒီဈေးပဲလေ။
နာမည်ပေါက်ရလို့ မရလို့ ဈေးကွာတာမှမဟုတ်တာ။
အဲ့လို ၁၀ နှစ်လောက်ကြီး ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးမှ ခုမှ အမည်ပေါက်ဖြစ်ရမယ်လို့ ဘာလို့ ထလုပ်တာလဲ။ အဲ့တုန်းက ဘာကြောင့်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသလဲ။ ကညနက လူတွေဖြေကြည့်လေ။
နာမည်ပေါက်ဖြစ်စေချင်ရင် ကညနမှာ နာမည်ပေါက်ပြောင်းခယူ ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပေါ့။ ခုတော့ အခွန်ဆောင်ရအုံးမှာဆိုတော့ မခက်ဘူးလား။
ထိုင်းမှာ ကားအမည်ပေါက်ပြောင်းရင် ၅ သောင်းလောက်ပဲကုန်တယ်။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပြောင်းပြောင်း ဒီလောက်ပဲတဲ့။ အဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးလား ကဲ
နောက် ကျနော်တို့ ဝယ်စီးတယ်ဆိုတာက Brandnew အသစ်တွေမှမဟုတ်တာ
သူများတိုင်းပြည်က စီးပြီးသား အဟောင်းတွေလေ။
တစ်စီးကို နှစ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်စီးရမှာလဲ။ အမြဲအလဲအထပ်လုပ်ပြောင်းစီး နေကြတာလေ။ အဲ့လိုအဟောင်းတွေကို တကယ်ဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးထက် နှစ်ဆ သုံးဆလောက် မတန်တဆဈေး ပိုပေးစီးနေကြရတာ။ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်သနားဖို့ကောင်းလဲ။
ဒီကြားထဲ ခု အခွန်ထပ်ဆောင်ရအုံးမယ်ဆိုတော့ . . . ဒီကားတွေက သွင်းလာတုန်းက အခွန်လိုအပ်ချက်တွေများရှိခဲ့လို့လား
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍဘီလျံရာနဲ့ချီနစ်နာခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ်နဲ့သွင်းလာတဲ့ အခွန်မဲ့ 9/E နံပါတ် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးကားတွေတောင် အေးဆေးပဲလေ
နောက်အဆိုးဆုံးကတော့ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေက ကညန တို့ အခွန်ရုံးတို့ဆိုကြောက်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှုပ်ထွေး ခက်ခဲမှုတွေအရမ်းများလို့။ တက်နိုင်သမျှ မသွားချင်ကြဘူး။
အထူးသဖြင့် အခွန်ကိစ္စဆို ရှင်းလင်းစွာ နာလည်သူမရှိသလောက်ပဲ။ မှန်တာပြောကိုယ်တောင်နားမလည်ဘူး။
ဥပမာ အခု အခွန်ရာဖြတ်မယ်ဆိုရင်တောင် Crown 2004 3.0 အက္ခရာ D E F ဆို သိန်းသုံးရာ ပတ်ဝန်းကျင် အဲ့ထက်အက္ခရာမြင့်တဲ့ကားတွေဆို ၄၀၀ အထက်တွေလေ
အဲ့တော့ ဘယ်လိုစံနဲ့ဖြတ်မလဲ။ Crown 2004 3.0 ဆိုတာနဲ့ အားလုံးတန်းတူဖြတ်မှာလား ဒါတောင် ရန်ကုန်လိုင်စင်နယ်လိုင်စင်ကွာသေးတယ်။ ဂရိတ်ပေါ်မူတည်ကွာသေးတယ်။ အခွန်အရာရှိပါးစပ်ထဲမှာရှိတော့ အဂတိတရားတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား
၊ အဲ့လိုတွေရှုပ်ထွေးတဲ့ ရုံးကိစ္စတွေကို ပြည်သူတွေက ရင်ဆိုင်ရမှာ အရမ်းကြောက်တယ်။
နောက် ရန်ကုန်လိုင်စင်က နယ်လိုင်စင်ပြောင်းလို့ရပြီး နယ်လိုင်စင်ကကြတော့ ရန်ကုန်လိုင်စင်ဖောက်မရဘူးဆိုတဲ့ သဘာဝမကျတာတွေအများကြီးလို့မြင်တယ်
နောက် အရေးကြီးဆုံးကတော့ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း အခုချိန်မှာ ပြည်သူအားလုံးက ကြပ်တည်းနေတယ်။ အလုပ်အကိုင်တွေမကောင်းကြဘူး။ ဒီကြားထဲ ပြည်သူတွေက အခွန်ပေါင်းစုံပိနေတယ်။
အခွန် ၂ ထပ် ၃ ထပ်ပြန်ဆောင်နေကြရသလိုပဲ။ အခွန်ပေါင်းစုံသာ ပေးဆောင်နေရပေမယ့် နိုင်ငံသားတစ်ဦး ရရှိသင့်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကြတော့ ပြန်မရသလိုခံစားရတယ်။
အဲ့တော့ ခု နာမည်ပေါက်ဖြစ်ရေးကို လုပ်ဆောင်မှုကို နည်းနည်းပြန်သုံးသပ်စေချင်တယ်။
လျော့ပေါ့သက်သာခွင့်လေးစဉ်းစားပေးစေချင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း. သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေသိဖို့ ဗီအိုအမ် လူထုအသံ ကဏ္ဍကနေ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ခု ကားမညျပေါကျပွောငျး အခှနျဆောငျရမှာနဲ့ ပတျသကျပွီး ကားပိုငျရှငျ ကိုကြျောကွီးက ဗီအိုအမျကနေ အမြားပွညျသူသိအောငျ အိတျဖှငျ့ပေးစာ ပေးပို့ထားပါတယျ။
မှနျတာပွော ဘာမှကို ပွောခငျြစိတျမရှိတာ ပွောရမယျဆိုရငျ အားနညျးခကျြတှကေ အမြားကွီးလို့မွငျသလိုပဲ ၊ အစိုးရက သူတို့ဖွဈခငျြတာလုပျတာ ပွညျသူ့ကောငျးကြိုးလား သူတို့ကောငျးကြိုးလားကို မကှဲဘူး
ကားကို ပိုငျရှငျအမညျပေါကျဖွဈရမယျဆိုတာကို အပွညျ့အဝလကျခံတယျ။ ဖွဈသငျ့တယျ။
အမညျပေါကျပွောငျးရတာ ကိစ်စမရှိပမေယျ့ အခှနျထပျဆောငျရတာမှာ ပွောစရာ ထောကျပွစရာ အားနညျးခကျြတှကေ အမြားကွီး
တကယျတော့ဗြာ ဦးသိနျးစိနျလကျထကျ ကားဟောငျးအပျ ကားသဈစသှငျးခှငျ့ပွုကတညျးက ကိုယျ့ကားဟာ ကိုယျ့အမညျ့ပေါကျဖွဈရမယျ သကျတမျးတိုးရငျ ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျဖွဈရမယျဆိုတဲ့ အခကျြကို ဘာအတှကျလြော့ပေးခဲ့လဲ။
အဲ့လိုလြော့ပေးခဲ့တော့ဗြာ အဲ့အခြိနျက ကားဝယျရငျ နာမညျပေါကျရရ မရရ ဂရုမစိုကျခဲ့ဘူး။ ဝယျခဲ့တာပဲ။ နာမညျပေါကျရလညျး ဒီဈေးပဲ။ မရလညျးဒီဈေးပဲလေ။
နာမညျပေါကျရလို့ မရလို့ ဈေးကှာတာမှမဟုတျတာ။
အဲ့လို ၁၀ နှဈလောကျကွီး ခှငျ့ပွုခဲ့ပွီးမှ ခုမှ အမညျပေါကျဖွဈရမယျလို့ ဘာလို့ ထလုပျတာလဲ။ အဲ့တုနျးက ဘာကွောငျ့ခှငျ့ပွုခဲ့ပါသလဲ။ ကညနက လူတှဖွေကွေညျ့လေ။
နာမညျပေါကျဖွဈစခေငျြရငျ ကညနမှာ နာမညျပေါကျပွောငျးခယူ ပွောငျးခိုငျးလိုကျပေါ့။ ခုတော့ အခှနျဆောငျရအုံးမှာဆိုတော့ မခကျဘူးလား။
ထိုငျးမှာ ကားအမညျပေါကျပွောငျးရငျ ၅ သောငျးလောကျပဲကုနျတယျ။ ဘယျနှဈကွိမျပွောငျးပွောငျး ဒီလောကျပဲတဲ့။ အဲ့လိုမဖွဈသငျ့ဘူးလား ကဲ
နောကျ ကနြျောတို့ ဝယျစီးတယျဆိုတာက Brandnew အသဈတှမှေမဟုတျတာ
သူမြားတိုငျးပွညျက စီးပွီးသား အဟောငျးတှလေေ။
တဈစီးကို နှဈဘယျလောကျကွာအောငျစီးရမှာလဲ။ အမွဲအလဲအထပျလုပျပွောငျးစီး နကွေတာလေ။ အဲ့လိုအဟောငျးတှကေို တကယျဖွဈသငျ့တဲ့ဈေးထကျ နှဈဆ သုံးဆလောကျ မတနျတဆဈေး ပိုပေးစီးနကွေရတာ။ ပွညျသူတှေ ဘယျလောကျသနားဖို့ကောငျးလဲ။
ဒီကွားထဲ ခု အခှနျထပျဆောငျရအုံးမယျဆိုတော့ . . . ဒီကားတှကေ သှငျးလာတုနျးက အခှနျလိုအပျခကျြတှမြေားရှိခဲ့လို့လား
ပွညျသူ့ဘဏ်ဍဘီလြံရာနဲ့ခြီနဈနာခဲ့တဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးပါမဈနဲ့သှငျးလာတဲ့ အခှနျမဲ့ 9/E နံပါတျ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးကားတှတေောငျ အေးဆေးပဲလေ
နောကျအဆိုးဆုံးကတော့ ကနြျောတို့ပွညျသူတှကေ ကညန တို့ အခှနျရုံးတို့ဆိုကွောကျတယျ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှုပျထှေး ခကျခဲမှုတှအေရမျးမြားလို့။ တကျနိုငျသမြှ မသှားခငျြကွဘူး။
အထူးသဖွငျ့ အခှနျကိစ်စဆို ရှငျးလငျးစှာ နာလညျသူမရှိသလောကျပဲ။ မှနျတာပွောကိုယျတောငျနားမလညျဘူး။
ဥပမာ အခု အခှနျရာဖွတျမယျဆိုရငျတောငျ Crown 2004 3.0 အက်ခရာ D E F ဆို သိနျးသုံးရာ ပတျဝနျးကငျြ အဲ့ထကျအက်ခရာမွငျ့တဲ့ကားတှဆေို ၄၀၀ အထကျတှလေေ
အဲ့တော့ ဘယျလိုစံနဲ့ဖွတျမလဲ။ Crown 2004 3.0 ဆိုတာနဲ့ အားလုံးတနျးတူဖွတျမှာလား ဒါတောငျ ရနျကုနျလိုငျစငျနယျလိုငျစငျကှာသေးတယျ။ ဂရိတျပျေါမူတညျကှာသေးတယျ။ အခှနျအရာရှိပါးစပျထဲမှာရှိတော့ အဂတိတရားတှဖွေဈမလာနိုငျဘူးလား
အဲ့လိုတှရှေုပျထှေးတဲ့ ရုံးကိစ်စတှကေို ပွညျသူတှကေ ရငျဆိုငျရမှာ အရမျးကွောကျတယျ။
နောကျ ရနျကုနျလိုငျစငျက နယျလိုငျစငျပွောငျးလို့ရပွီး နယျလိုငျစငျကကွတော့ ရနျကုနျလိုငျစငျဖောကျမရဘူးဆိုတဲ့ သဘာဝမကတြာတှအေမြားကွီးလို့မွငျတယျ
နောကျ အရေးကွီးဆုံးကတော့ အားလုံးသိတဲ့ အတိုငျး အခုခြိနျမှာ ပွညျသူအားလုံးက ကွပျတညျးနတေယျ။ အလုပျအကိုငျတှမေကောငျးကွဘူး။ ဒီကွားထဲ ပွညျသူတှကေ အခှနျပေါငျးစုံပိနတေယျ။
အခှနျ ၂ ထပျ ၃ ထပျပွနျဆောငျနကွေရသလိုပဲ။ အခှနျပေါငျးစုံသာ ပေးဆောငျနရေပမေယျ့ နိုငျငံသားတဈဦး ရရှိသငျ့တဲ့ ဝနျဆောငျမှုကွတော့ ပွနျမရသလိုခံစားရတယျ။
အဲ့တော့ ခု နာမညျပေါကျဖွဈရေးကို လုပျဆောငျမှုကို နညျးနညျးပွနျသုံးသပျစခေငျြတယျ။
လြော့ပေါ့သကျသာခှငျ့လေးစဉျးစားပေးစခေငျြတယျ ဆိုတဲ့ အကွောငျး. သကျဆိုငျရာ အစိုးရ တာဝနျရှိသူတှသေိဖို့ ဗီအိုအမျ လူထုအသံ ကဏ်ဍကနေ တငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
#voiceofmyanmar #people’s voice #လူထုအသံ